ပရိသတ်အားနဲ့ နောက်ထပ်ချန်ပီယံဆု ရယူသွားမယ့် အောင်လအန်ဆန်
20 Feb 2018 . 5:33 PM
MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်မှာယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့်MMA လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရေးအတွက် အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး မြန်မာပရိသတ်အားနဲ့ နောက်ထပ်ချန်ပီယံဆုရယူမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲအတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Rose Garden ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး အောင်လအန်ဆန်နဲ့အတူမာချာဒို (ဘရာဇီးလ်)၊ ဖိုးသော် (မြန်မာ) နဲ့ဆိုဆေး (ကမ္ဘောဒီးယား) တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းအခမ်းအနားမှာ Quest For Gold ပြိုင်ပွဲကို Telenor ကပံ့ပိုးကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်က”ပထမရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့က ပြည့်ဝခဲ့ပါပြီ။ ဒုတိယရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းထက် ၀ိတ်တန်းပိုမြင့်တဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့ အားသာချက်တွေကို လေ့လာထားပါတယ်။ သူက ဂျူဂျစ်ဆုမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်က ဘက်ပေါင်းစုံက ထိုးနိုင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဂျူဂျစ်ဆုရော နပန်းနဲ့ လက်ဝှေ့အားကစားနည်းတွေပါ ထိုးသတ်မှာပါ။ အနိုင်ရဖို့အတွက် မိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့ ဖလော်ရီဒါအထိ သွားပြီးလေ့ကျင့်ထားပါတယ်။ အန်ဂယ်လာနီနဲ့ပွဲတုန်းက နှစ်ချီအတွင်း အနိုင်ထိုးမယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် အခုပွဲမှာတော့ ပြိုင်ဘက်အနေအထားအရ ကြိုပြီးပြောဖိုမလွယ်ပါဘူး။ နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပေမယ် ဘယ်နှချီမှာ နိုင်မလဲဆိုတာတော့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ပရိသတ်အားနဲ့ နောက်ထပ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုရယူမှာပါ”လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မာချာဒိုက”၂၀၁၆ မှာ အန်ဂယ်လာနီနဲ့ထိုးပြီး MMA ပြိုင်ပွဲတွေ မထိုးတော့ပေမယ့် လေ့ကျင့်မှုတော့ မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ အခုထိုးသတ်မယ့် အောင်လနဲ့ပွဲအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုတွေလည်း အကောင်းဆုံးပြုလုပ်နေပါတယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုမျိူးတွေ တွေ့မြင်ရမှာပါ”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်နှင့် မာချာဒိုတို့ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲပါဝင်မယ့်Quest For Gold ပြိုင်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံ-၁ သုဝဏ္ဏမှာ ကျင်းပသွားပါမယ်။
ပရိသတျအားနဲ့ နောကျထပျခနျြပီယံဆု ရယူသှားမယျ့ အောငျလအနျဆနျ
MMA မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျက ဖဖေျောဝါရီ ၂၃ ရကျမှာယှဉျပွိုငျထိုးသတျမယျ့MMA လိုကျဟဲဗီးဝိတျ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလုပှဲတှငျ အနိုငျရရှိရေးအတှကျ အကောငျးဆုံးယှဉျပွိုငျသှားမယျလို့ ဆိုလိုကျပွီး မွနျမာပရိသတျအားနဲ့ နောကျထပျခနျြပီယံဆုရယူမယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ပွိုငျပှဲအတှကျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကို ဖဖေျောဝါရီ ၂၀ ရကျက ရနျကုနျမွို့ရှိ Rose Garden ဟိုတယျမှာ ကငျြးပခဲ့ပွီး အောငျလအနျဆနျနဲ့အတူမာခြာဒို (ဘရာဇီးလျ)၊ ဖိုးသျော (မွနျမာ) နဲ့ဆိုဆေး (ကမ်ဘောဒီးယား) တို့ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ယငျးအခမျးအနားမှာ Quest For Gold ပွိုငျပှဲကို Telenor ကပံ့ပိုးကူညီမှာဖွဈတယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
အောငျလအနျဆနျက”ပထမရညျမှနျးခကျြဖွဈတဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးမှာ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈဖို့က ပွညျ့ဝခဲ့ပါပွီ။ ဒုတိယရညျမှနျးခကျြဖွဈတဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးထကျ ဝိတျတနျးပိုမွငျ့တဲ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျးမှာ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ ပွိုငျဘကျကစားသမားရဲ့ အားသာခကျြတှကေို လလေ့ာထားပါတယျ။ သူက ဂြူဂဈြဆုမှာ ကြှမျးကငျြတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောက ဘကျပေါငျးစုံက ထိုးနိုငျအောငျလုပျထားပါတယျ။ ဂြူဂဈြဆုရော နပနျးနဲ့ လကျဝှအေ့ားကစားနညျးတှပေါ ထိုးသတျမှာပါ။ အနိုငျရဖို့အတှကျ မိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့ ဖလျောရီဒါအထိ သှားပွီးလကေ့ငျြ့ထားပါတယျ။ အနျဂယျလာနီနဲ့ပှဲတုနျးက နှဈခြီအတှငျး အနိုငျထိုးမယျလို့ ပွောခဲ့ပမေယျ့ အခုပှဲမှာတော့ ပွိုငျဘကျအနအေထားအရ ကွိုပွီးပွောဖိုမလှယျပါဘူး။ နိုငျမယျလို့ယုံကွညျပမေယျ ဘယျနှခြီမှာ နိုငျမလဲဆိုတာတော့ ပွောဖို့ခကျပါတယျ။ ပရိသတျအားနဲ့ နောကျထပျကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဆုရယူမှာပါ”လို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။
မာခြာဒိုက”၂၀၁၆ မှာ အနျဂယျလာနီနဲ့ထိုးပွီး MMA ပွိုငျပှဲတှေ မထိုးတော့ပမေယျ့ လကေ့ငျြ့မှုတော့ မပကျြခဲ့ပါဘူး။ အခုထိုးသတျမယျ့ အောငျလနဲ့ပှဲအတှကျ အကောငျးဆုံးပွငျဆငျနပေါတယျ။ လကေ့ငျြ့မှုတှလေညျး အကောငျးဆုံးပွုလုပျနပေါတယျ။ မထငျမှတျတဲ့ စှမျးဆောငျမှုမြိူးတှေ တှမွေ့ငျရမှာပါ”လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
အောငျလအနျဆနျနှငျ့ မာခြာဒိုတို့ရဲ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလုပှဲပါဝငျမယျ့Quest For Gold ပွိုငျပှဲကို ဖဖေျောဝါရီ ၂၃ ရကျ ညနပေိုငျးမှာ ရနျကုနျမွို့၊ အမြိုးသားအားကစားပွိုငျပှဲရုံ-၁ သုဝဏ်ဏမှာ ကငျြးပသှားပါမယျ။
by Ko Kyue . 57 mins ago